Levitika 27 - Ny Baiboly
Levitika toko 27
Ny voady sy ny fahafolon-karena.
1Ary Iaveh niteny tamin'i Moizy nanao hoe: 2Mitenena amin'ny zanak'Israely ka lazao amin'izy ireo hoe: Raha misy olona mivady, dia an'ny Tompo ny olona, araka izay anombananao azy. 3Raha lehilahy no hotombananao ny hatramin'ny roapolo taona ka hatramin'ny enimpolo taona, dia tombano volafotsy dimampolo sikla araka ny sikla masina; 4ary raha vehivavy, dia telopolo sikla no hanombananao azy. 5Ny hatramin'ny dimy taona ka hatramin'ny roapolo taona, raha zazalahy dia roapolo sikla no hanombananao azy, ary raha zazavavy dia folo sikla. 6Ny hatramin'ny iray volana ka hatramin'ny dimy taona, raha zazalahy dia dimy sikla no hanombananao azy, ary raha zazavavy dia telo sikla. 7Ny hatramin'ny enimpolo taona no ho miakatra dia dimy ambin'ny folo sikla raha lehilahy, ary folo sikla raha vehivavy. 8Raha mahantra loatra izay olona mivoady ka tsy mahaloa ny tombana nataonao, dia hoentina mankeo amin'ny mpisorona izay hanombana azy izy, ka dia hoferan'ny mpisorona araka ny toe-pananan'ny olona nivoady ny tombany.
9Raha biby fanao fanatitra ho an'ny Tompo no nivoadina, dia ho zava-masina izay rehetra homena an'ny Tompo toy izany. 10Tsy hosoloana izany, ny ratsy tsy hasolo ny tsara, ny tsara tsy hasolo ny ratsy; ary raha soloana biby anankiray ny biby anankiray hafa, dia ho samy zava-masina izy roroa. 11Ary raha biby maloto tsy fanao fanatitra amin'ny Tompo kosa, dia hoentina mankeo amin'ny mpisorona, 12ka ny mpisorona no hanombana azy araka ny hatsarany na haratsiany, dia izay tombany ataon'ny mpisorona no hekena. 13Raha tiana havotana izy dia hotongoavana ny ampahadimin'izay nanombananao azy.
14Raha misy olona manamasina ny tranony manokana azy ho an'ny Tompo, dia hotombanan'ny mpisorona araka ny hatsarany na haratsiany ny trano, ka izay tombany ataon'ny mpisorona no harahina. 15Raha te-hanavotra ny tranony ilay nanamasina azy, hotongoaviny ny ampahadiminy izay nanombananao azy, dia ho azy ny trano.
16Raha misy olona manokana ho an'ny Tompo ny sasany amin'ny zara taniny, dia ho araka ny voa famafy aminy no hanombananao azy, ka volafotsy dimampolo sikla no hanombananao ny tany mifafy orja iray gomera. 17Raha miantomboka amin'ny taona Jobile no anokanany ny taniny dia io tombany nataonao io no arahina, 18fa raha aty aorian'ny Jobile kosa no anokanany ny taniny, dia ho araka ny isan'ny taona sisa mandra-pihavin'ny Jobile no hanombanan'ny mpisorona ny vidiny, ka hahena ny tombany nataonao. 19Raha te-hanavotra ny taniny ilay nanokana azy, hotongoaviny ny ampahadiminy izay vidiny nanombananao azy, dia hipetraka ho azy ny tany. 20Raha tsy havotany ny tany na hamidiny amin'olona hafa dia tsy azo havotana intsony; 21fa rahefa afaka amin'ny Jobile ny tany dia hatokana ho an'ny Tompo toy ny tany nivoadiana, ka ho tonga fananan'ny mpisorona. 22Raha misy olona manokana ho an'ny Tompo ny tany novidiny tsy anisan'ny zara taniny; 23dia ho eran'ny mpisorona izay vidiny, araka ny anombananao azy mandra-pihavin'ny taona Jobile, dia haloan'izany olona izany androtr'io ihany izay voafetra ho vidiny, ho zavatra voatokana ho an'ny Tompo. 24Amin'ny taona Jobile dia hiverina amin'izay nividianana azy sy tompon-jara tany azy ilay tany. 25Ny tombana rehetra hataonao araka ny sikla masina: roapolo gerà ny sikla iray. 26Tsy misy anefa mahazo manokana voalohan-teraky ny biby fiompiny, fa efa an'ny Tompo rahateo izany noho ny mahavoalohan-teraka azy, ka na omby, na ondry dia efa an'ny Tompo izany. 27Ary ny amin'ny biby maloto dia havotana araka izay tombany hataonao izy, hotongoavina ny ampahadiminy, fa raha tsy avotana izy dia hamidy araka izay hanombananao azy. 28Izay rehetra natokan'ny olona nataony anatema ho an'ny Tompo amin'izay rehetra ananany, na olona na biby, na tany zara lovany, dia tsy ho azo hamidy na havotana, fa zava-masina dia masina an'ny Tompo avokoa izay rehetra natokana natao anatema. 29Tsy misy azo avotana izay olona natao anatema, fa hatao maty. 30Ny ampahafolon'ny vokatra rehetra avy amin'ny tany, na ny avy amin'ny voa famafy amin'ny tany, na ny avy amin'ny voan'ny hazo, dia an'ny Tompo avokoa, zava-boatokana ho an'ny Tompo izany. 31Raha misy olona te-hanavotra amin'ny ampahafolon'ny vokany, dia hotongoaviny ny ampahadiminy izay vidiny. 32Ny ampahafolon'ny biby fiompy, na vaventy na madinika, amin'izay biby fiandry rehetra, dia hatokana ho an'ny Tompo avokoa ny ampahafalony. 33Tsy azo ifidianana izay tsara na ratsy izany, ary tsy azo takalozana koa; fa raha takalozana dia ho samy zava-masina avokoa, na ny biby natakalo, na izay natakalo azy, sady samy tsy ho azo avotana. 34Ireo no didy nomen'ny Tompo an'i Moizy ho an'ny zanak'Israely, tao an-tendrombohitra Sinaia. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0990 seconds